Impilo enesifo sikashukela > Isifo Sikashukela Sokunqoba!
Ukuthi ulwandle, ukushisa ne-tan kuthinta kanjani isiguli esinesifo sikashukela, imiphi imikhawulo
Ungashiswa kanjani yisifo sikashukela ngendlela efanele abantu abanesifo sikashukela, njengawo wonke umuntu, badinga amavithamini D. Ukuze aqale ukwakheka emzimbeni, udinga ukuchitha okungenani imizuzu eyi-15 elangeni. ...
Izinto ezingahambelani: umthelela wokubhema ushukela wegazi kanye nemiphumela engaba khona yomkhuba omubi kwabanesifo sikashukela Lokho okushilo vele ukuthi imikhuba emibi eyanele ayifaki sandla empilweni enempilo yanele. ...
Ngabe babhalelwa ebuthweni labanesifo sikashukela?
I-Service noma i-ID yezempi: ingabe abantu abanesifo sikashukela bangena ebuthweni? Umthetho waseRussia ufuna abantu asebefinyelele eminyakeni eyishumi nesishiyagalombili ukuba basebenze ebuthweni. Abantu abasha, sebethole amasamanisi, baya esiteshini sokuqasha. ...
Iseluleko sesiguli esinesifo sikashukela i-mellitus Ukuze silondoloze impilo enhle, sigcine umsebenzi ophakeme futhi sivikele nezinkinga, isiguli esinesifo sikashukela kufanele sibheke ukwelashwa okukhethekile kanye nohlobo lokuvimbela empilweni yansuku zonke. ...
Izincwadi ezinhle kakhulu zokuphila impilo enempilo nesifo sikashukela - izeluleko zochwepheshe nezindlela zokupheka! Isifo sikashukela sibizwa ngokuthi "ukubulala omnandi." Ekubonweni kwakhe emhlabeni kunabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-400. ...
Kungani udinga isikole sikashukela?
Indlela yokusebenza yokwenza amakilasi eSikoleni SezeMpilo ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2 Ukuqapha ulwazi olutholwayo, amakhono namakhono ISifundo se-5 Sifundo 4 Ukweqisa kwesifo somoya (bruschial asthma). Ungasilawula kanjani lesi sifo? ...
Ngingakwazi ukugeza umusi kushukela? Wonke umuntu uyathanda ukugeza okutshisayo. Lesi yisikhathi esihle lapho ungaphumuza khona umzimba nomphefumulo. ...
Impilo yocansi nempilo yesifo sikashukela: izinkinga nezinzuzo ezingaba khona
Ukuya ocansini kanye nokuphila ngokocansi onesifo sikashukela: Izinkinga ezingaba khona nezinzuzo Zokuthola ucansi nesifo sikashukela Amadoda anesifo sikashukela angahlushwa ukuqina komzimba. ...
Isikhathi sokuphila sesifo sikashukela: zingaki izazi zesifo sikashukela ezihlala?
Ungaphila kanjani nesifo sikashukela futhi uqine futhi ube nempilo (izeluleko ezivela kulwazi) ngithumele le ngxoxo esizeni, ngoba izeluleko ezibaluleke kakhulu yiseluleko esivela kumuntu onenkinga ethile futhi onomphumela omuhle wokuyixazulula. ...
Isifo sikashukela nokushayela imoto: imithetho yezokuphepha neyokuqala yokuhlaselwa kwe-hypoglycemia
Isifo sikashukela nokushayela imoto Ukushayela imoto ngesifo sikashukela akuyona into ephula umthetho ukuze ube nelayisense yokushayela. ...
Izinga lempilo leziguli ezinesifo sikashukela
Izincomo zomtholampilo zokwenza ngcono izinga lokuphila kwesifo sikashukela i-mellitus Diabetes mellitus yisifo esingaqedwa ngokuphelele. Ngakho-ke, inomthelela empilweni yomuntu. ...
Ukunakekelwa kobuchwepheshe bonyawo lwesifo sikashukela: ubuqili bokwenza i-classic kanye ne-hardware pedicure
ISIBONELELO SE-HARDWARE SOKWENZA ISIFO SEZIFO ZESIFO SOKUSHA kusitshela ukuthi isibalo seziguli ezinesifo sikashukela sehla, kodwa sikhula ngokushesha, futhi ngenxa yalokho, isibalo sochwepheshe kulo mkhakha siyakhula. ...
Unganciphisa kanjani isisindo sikashukela
Ungawehlisa kanjani isisindo ngohlobo lwe-1 sikashukela i-mellitus Diabetes mellitus wethula imikhawulo ethile empilweni yomuntu. Isiguli siphoqelelwa ukuthi siguqule ukudla kanye nomthwalo emzimbeni. ...